यहाँ किन तपाईको भोजनमा दही चामल समावेश गर्नु पर्छ - PAMPEREDPEOPLENY.COM - स्वास्थ्य
यहाँ किन तपाइँको आहार मा दही चामल समावेश गर्नुपर्छ
घर स्वास्थ्य डाइट फिटनेस डाइट फिटनेस लेखक - DEVIKA BANDYOPADHYA द्वारा देविका बन्दोपाध्याय मार्च २,, २०१। मा
वर्षौंको अवधिमा दहीको उपभोग धेरै स्वास्थ्य लाभहरूसँग सम्बन्धित छ। दही, दही चामलको रूपमा, जब लगातार वा दैनिक आधारमा खाइन्छ यसले तपाईंको पाचन प्रणालीलाई मात्र नभएर तपाईंको समग्र स्वास्थ्यमा पनि ठूलो परिणाम देखाउँदछ।
दही चामल दक्षिण भारतमा शुरु भएको हो भनेर चिनिन्छ तर यसको उपभोग भारतको दक्षिणी क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन। यो उत्तर भारतमा पनि धेरै प्रसिद्ध छ, विशेष गरी गर्मीको समयमा। दही चावल खानाको लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प भनिन्छ जब कुनै एक पेटमा पीडित छ।
भविष्यमा म कति बच्चाहरु हुनेछु
दही चामल एक स्वास्थ्य बूस्टरको रूपमा
भान्साकोठामा तयार पार्न सबैभन्दा सजिलो डिशको बाहेक, दही चामलको धेरै स्वास्थ्य लाभहरू छन्।
Blo पेट फूल्ने बिरूद्ध काम गर्ने आफ्नो क्षमताको साथ, दही चावल उत्तम घर उपचारको रूपमा काम गर्दछ जब तपाईं अस्वस्थ पेट र अपचबाट पीडित हुनुहुन्छ। दही चामल पाचन सहायताको लागि प्रसिद्ध छ।
• यो सुझाव छ कि दही चामल आदर्श रूपले चिसो खान्नु पर्छ। यसले शरीरलाई चिसो पारेर आन्तरिक शरीरको तापमान कायम राख्न मद्दत गर्दछ। तसर्थ, दही चामल राम्रो डिश जस्तो हुन्छ जुन तपाईं खान सक्नुहुन्छ यदि तपाईंलाई ज्वरो आएको छ भने। साथै, यो पनि मनाइएको छ कि यदि धेरै तातो दिनमा खाइन्छ भने, यसले तपाईंको शरीरलाई धेरै छिटो ताप्दैन।
असफलता सफलताको लागि ढुंगा हो
Urd दहीमा एन्टिऑक्सिडन्टहरू, प्रोबायोटिक्स र फ्याटहरू हुन्छन्, राम्रो फाराममा। तसर्थ, तनाव जस्ता भावनाहरू दही सेवन गरेर सजिलै छुटकारा पाउन सकिन्छ। तसर्थ, दहीलाई स्ट्रेस बस्टर पनि भनिन्छ। यसले दिमागलाई दुखाइ र दुखाइको भावनासँग पनि मद्दत गर्दछ।
Urd दही चामल सबैभन्दा उत्तम रोजाइहरूमध्ये एक हो, कमसेकम एक खानाको समयमा, वजन घटाउने लक्ष्य हासिल गर्न कोशिस गरिरहेका व्यक्तिहरूको लागि। एक कचौरा दही भातले भरिएकोले तपाईंको पेट भरी रहन्छ र तपाईंलाई उच्च क्यालोरी स्नैक्समा कुचुल्नबाट रोक्न सक्छ। फ्राइड चामलको तुलनामा, दही चामलमा लगभग नगण्य मात्रामा क्यालोरी हुन्छ।
Anti एन्टिअक्सीडन्टको उपस्थितिमा, दही चामल सबैभन्दा ठूलो भाँडा माझेर हो, विशेष गरी बिरामीको समयमा। यसले शरीरको प्रतिरोध क्षमता बढाउँछ र शरीरलाई संक्रमणसँग लड्न मद्दत गर्दछ। यो पनि एक बिरामी छ जब शरीर को धेरै आवश्यक ऊर्जा को आपूर्ति गर्दछ।
माथि उल्लेखित बाहेक, त्यहाँ धेरै अन्य कारणहरू छन् जुन कसैले दही चामल छनौट गर्ने छ। यो एउटा भाँडा हो जुन शिशुलाई दिन सकिन्छ। दही चामल कार्बोहाइड्रेट र प्रोटीनमा धनी हुन्छ, यसैले तपाईंको पोषण सेवन बढाउँदछ।
कुनै समय, मसालेदार थाल पछि दही चामल हुनु धेरै आरामदायी हुन सक्छ। चिडिनु र जल्दो संवेदनाले भुटेको र मसलादार खानाको उपभोग पछि केवल एक कप दही चामल राखेर ठीक गर्न सकिन्छ। दही, सामान्यतया, तपाईको छालामा ग्लो दिनको लागि पनि परिचित छ, यो धेरै घरको अनुहार प्याकको एक हिस्सा हो।
दही चामल कसरी तयार गर्ने?
दही चामल तयार पार्नु एकदम सजिलो छ। तपाईं केवल एक कचौरा मा चावल र दही मिक्स। प्यानमा केही तेल तताउनुहोस्, यसमा जीरा, कालो चना र करी पात थप्नुहोस्। एकपटक तताएपछि, यो कचौरामा दही चावलमाथि खन्याउनुहोस्। यसलाई राम्रोसँग मिलाउनुहोस् र तपाईंको दही चामल खानको लागि तयार छ। तयार गर्न को लागी यो सरल हुनु, यो एक जो एक्लो र ज्वरो संग तल छ जो द्वारा तैयार गर्न सकिन्छ।
मध्यम कपालका लागि दक्षिण भारतीय विवाह कपाल
यो केहि मिनेट अन्तर्गत सजिलैसँग तैयार भएकोले यसले तपाईंलाई थाक्ने छैन र तनाव गर्दैन। तपाईले हरियो खोर्सानी, रायोको दाना, किसमिस र काजू थपेर आफ्नो दही चामल स्वाद बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। फलहरू जुन तपाईंको दही भातमा यसलाई थप पौष्टिक बनाउन थप्न सकिन्छ भने अनारको दाना, अpes्गुर, गाजर र कच्चा आम हो।
दही चामल पखालाबाट पीडित व्यक्तिहरूको लागि राम्रो विकल्प हो। जब मेथीको एक साथ सँगै खाईन्छ, यो तपाईंको पेट राहत दिन्छ। यसले पेट दुखाइ पनि कम गर्दछ।
दही चावल डाक्टरहरूले सल्लाह दिईरहेका छन् महिलाहरु जो उनीहरुको रजोनिवृत्ति नजिकै छ। यो शरीरमा क्याल्सियमको राम्रो आपूर्ति हुन्छ।
दूधसँग तुलना गर्दा दही राम्रो विकल्प हुन्छ विशेष गरी दही धानको रूपमा। यसले तपाईंलाई भारी भावना प्रदान गर्दैन कि तपाईले गिलास दुध पिईरहेको हुन सक्छ। अध्ययनहरूले यो पनि फेला पारे कि दहीमा रहेको प्रोटीन दुधमा भएको प्रोटिनभन्दा छिटो पचाउन सकिन्छ। पोटेशियमको स्रोतको रूपमा दहीले तपाईंलाई रक्तचाप नियमित राख्न मद्दत गर्दछ। पियालाई निको पार्न महको साथ दहीको सेवन प्रभावकारी पाइएको छ।
कसरी7दिनमा हात फ्याट कम गर्न
दही राम्रो पोषण को एक हुनु पक्कै पनि सबैको आहार योजना को एक हिस्सा हुनु पर्छ र के राम्रो जब तपाईं यसलाई दही चामल को रूप मा पाउन सक्नुहुन्छ, जो यसको सबैभन्दा स्वादिष्ट रूप हो।
झिल्ली मिर्च भुसाइएको नरिवल संग फ्राई
शाहिद कपूरको कूल पोशाक वा राजकुमार रावको क्याजुअल आउटफिट, तपाई कुन मन पराउनुहुनेछ?
१० रोगहरू जुन योगको साथ व्यवहार गर्न सकिन्छ
गाढा माथिल्लो ओठलाई हल्का पार्न प्राकृतिक उपचार
F शानदार गृह-निर्मित फलफूलको बोक्राले तपाईंको अनुहार चम्काउन अनुहारको मास्कहरू बन्द गर्दछ
प्रस्तुत गर्दै प्रेस्टिज भेजी कटर
तपेश्वरी शर्मा श्रीमती फेमिना अनलाइन हन्टको विजेता बन्छन्; फेसन चुनौती देखि उनको शैली मा एक नजर
गोभी थोरान रेसिपी: कसरी पारम्परिक गोभी थोरन बनाउने
क्याट्रिना कैफको बहिनी, इसाबेला लैक्मे भारतको लागि नयाँ स्टाइलिश नयाँ अनुहार हो
श्रद्धा कपूरको रंगीन को-ओर्डर सेट र वाणी कपूरको उत्तम मिडी तपाईंको पार्टीको मूड माथि जान्छ
वजन घटाउन मह खानुको Dif बिभिन्न तरिकाहरू
किन गणेशलाई 'एकदन्त' भनिन्छ?
adhik maas राम्रो छ वा नराम्रो
भारतमा पुरुषको लागि अन्तर्वार्ता ड्रेस कोड
पनीर कसरी वजन को लागी खान को लागी खानु
हनुमानलाई के प्रस्ताव गर्ने?
प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्ने उहाँलाई चोट पुर्‍याउनु हुँदैन